Heshiiska Cadan Oo Uu Col. C/Llahi Yusuf Uga Faa’ideysanayo Inuu Uga Guuro Jowhar iyo Inuu Dalka Soo Geliyo Ciidamo Itoobiyana Si Joogitaankooda Sabab Looga Dhigo Iney Sugayaan Amaanka Col. C/llahi Iyo Nabadgelyada Magaalada Ay Ku Shirayaan Garabyada Siyaasada Soomaalida Isaga Soo Horjeeda.
Buluugleey, January 14, 2006
Waxaa dhowaan magaalada Nairobi soo gaaray Shariif Xasan oo ka codsaday Mareykanka, Ingriiska iyo QM iney gacan ka geystaan sii deynta lacagta loogu tala galay in mushaar loo siiyo xubnaha baarlamaanka. lacag bixinta xildhibaanada ayaa ah xeelad la adeegsado markasta oo la doonayo in la hirgeliyo qorshe cusub, siyaasadaasna waxaa ku soo baxay Col. C/llahi markii ay dhaceysey doorashada madaxweynenimada.
Sidoo kale waxaa magaalada Adis Sabab soo gaarey Col. C/llahi Yusuf oo dowlada Itoobiya ka codsaday iney ciidamo xoogan ku taageeraan haddii xubnaha baarlamaanka ay ku shirayaan meel ka baxsan Muqdisho si loo adkeeyo xaruun ay rasmi ahaan uga howlgasho dowladiisu. Col. C/llahi ayaa wuxuu wadatashi hoose ugu noqday dowlada Itoobiya oo si dadban uga dambeysey heshiiska isaga iyo Shariifka si uu ula soo gorfeeyo xeeladan cusub sidii looga gaari lahaa danahii loogu talagalay.
Waxaa sidoo kale soo gaarey Nairobi Prof. Geeddi oo la qorsheynayo inuu la kulmo Shariifka si aan xubnaha baarlamaanka loogu mashquulin dhismo dowlad cusub ee ka soo baxda kulanka la filayo iney yeeshaan garabyada dowlad ay soo dhistay IGAD, taas oo ay si dadban u soo riixeyso dowlada Itoobiya si jagada wasiirka kowaad loogu magacaabo Jurille, ninkaas oo ay u aragto Itoobiya inuusan waxba kala hareyniin sidii uu daacadnimo ula shaqeyn lahaa danaha ay damacsan tahay Itoobiya, kaas oo salka ku haya isticmaalka kheyraadka Soomaaliya, lahaanshaha qeybo ka mida dhulka Soomaalida iyo u qeybinta jamhuuriyada Soomaalida maamul goboleedyo kala madax banana.
Waxaa sidoo kale jooga Nairobi Maxamed Dheere oo si laab furan magaaladaas ugu soo dhaweeyey Shariifka isaga oo u doonaya shariifka inuu ku buuxiyo miisaanka iska dhimay taageeradii uu u hayey Col. C/llahi iyo inuu u muujiyo inuu ku soo dhaweynayo in Shariif Xasan uu u soo guuro magaalada Jowhar haddii uu heshiiskii uu dhowaan la soo galay Col. C/llahi uu taageero uga waayo hogaamiye kooxeedyada hubeysan ee Muqdisho. Maxamed Dheere iyo Indhacade ayaa Cabsi looga qabaa iney ciidan ahaan ka horyimaadaan in Baydhabo ama Kismaayo ay xaruun u noqoto Col.C/llahi. Maxamed Dheere ayaa cabasho u gudbiyey dowlada Itoobiya, kaas oo ku saabsan khilaafka sii xoogeysanaya ee kala dhexeeya Col. C/llahi, jawaabta Itoobiya oo ahayd martiqaad ay u soo dirtay Maxamed Dheere ayaan waxba ka hirgelin. waxaa la filayaa marka Col. C/llahi uu ku soo noqdo Jowhar in xiisadoodu ay kala baxdo, waayo Maxamed Dheere ayaa u muuqda mid ka daaley madaxsalaaxa ay marba Itoobiya u soo dhiibeyso siyaasiyiinta ku heybta ah Col. C/llahi. Dad badan ayaa hadda dhegaha u taagaya waxa markaan lagu maslixi doono Maxamed Dheere si loo dabciyo xiisadiisa kacsan inta uu Col.C/llahi ka qalab aruursanayo Jowhar.
Dowladda Yemen ayaa sida la xaqiijinayo waxey dooneysaa in Soomaaliya ay ka dhameysato qorshooyin salka ku haya dhinaca kheyraadka batroolka. Yemen ayaa sida Sacuudiga iyo wadamada kale ee Carabta waxey daneyneysaa in batroolka ku hoos jira Soomaalida ay u hesho fursad ay dalkeeda kala soo baxdo, waxaana qorshahaas qeyb ka ah dowladda Itoobiya oo ciidan ahaan uga qeyb geleysa hirgelinta howshaas.Yemen ayaa sanooyinkii dambe bilowday soo saarida shidaalka iyo dabacsanaan ay kula dhaqmeyso shirkadaha qoda shidaalka. Haddii qorshahaas uu Yemen u hirgalo, waxey u suurtogelineysaa iney shidaal badan kala baxdo dhulkeeda kaas oo ka imaanaya godadka uu ku keydsan yahay oo ka soo maaxanaya xeebaha Soomaalida iyo gobolada waqooyiga Soomaaliya.
Hogaamiye kooxeedka Muqdisho ayaa ku kala tegey dhowaan maamulka ay u sameeyeen gobolka Banadir, laakiin dhamaantood waxey isku raacsan yihiin diidmada ay kala soo horjeedaan danaha cadowga Itoobiya iyo in baarlamaanka iyo dowlada Soomaalida ay xaruun ka dhigato meel aan ahayn magaalo madaxda Soomaaliya ee muqdisho. Kooxahaas hubeysan ayaa beel ahaan waxey taageero weyn ka heystaan malaayiin ka mida dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool degaanada ku wareegsan Muqdisho. Heshiiska uu soo galay Shariifka ayaan ahayn mid laga soo tixgeliyey hogaamiyeyaashaas, waxeyna ugu muuqataa in weli ay meesheedi taagan tahay siyaasada ku dhisneyd tixgelin la'aanta miisaanka culaabeed oo ay kala leeyihiin degaanada Soomaaliyeed iyo hogaamiyeyaashooda.
Dowladda Itoobiya iyo taageerayaasha siyaasada Col. C/llahi Yusuf ayaa is tusay in Shariifka laga soo leexiyo hogaamiye kooxeedyada Muqdisho, ujeedaduna waa in Shariifka kooxda taageersan ay kala soo go’aan Muqdisho, laguna qasbo Shariifka inuu xaruun ka dhigto Baydhabo oo ah meel lagu xakameyn karo dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed maadaama Magaaladaas ay ka ag dhow yihiin ciidamo Itoobiyana oo ku jira gudaha degaankaas. Qorshahaas waxey xubnaha baarlamaanka isugu celcelineysaa laba kooxood oo cusub, kuwaas oo ay isku baheysanayaan koox ka soo jeeda Bari, Kismaayo iyo Baydhabo iyo koox ka soo horjeeda oo ah inta kale. Heshiiska Cadan ayaa salka ku haya in khilaaf laga dhex abuuro Shariifka iyo kooxda Muqdisho, si qorshahaas loo socodsiina waxey dowlada Itoobiya ka sugeysaa in Shariifka uu qaado talaabo lagu dhaqangelinayo meel marinta heshiiskaas, oo sida la saadaalinayo marka ay isqabtaan kooxda Muqdisho in Shariifka uu taagerayaashiisa ula guuro Baydhabo.
Waxaa hadda muuqda in Prof. Geeddi iyo Maxamed Dheere ay u ku soo dhawaanayaan siyaasada kooxaha Muqdisho, kadib markii ay ka war heleen in Col. C/llahi uu ka dhameystay ujeedadii uu ka damacsanaa Jowhar haddaana uu geedi u yahay Baydhabo ama Kismaayo midood. Haddii labadaan masuul ay u leexdaan dhinaca siyaasada Muqdisho, Shariifkuna uu u leexdo siyaasda Itoobiya ee taageersan Col. C/llahi, waxaa sidaas ku soo dhamaaneysa isweydaar labada garab ay isdhaafsadeen xubno isdheelitiraya oo labad garab u kala saaraya kooxo isku heyb dhow ama danahoodu isku dhow yihiin.
Col. C/llahi ayaa hadda bam gacanta u geliyey Shariifka isaga oo ogolaaday in loo daayo mushaarka Shariifka iyo xildhibaanadiisa, sidoo kale wuxuu ogolaaday in Shariifku uu soo magacaabo magaalada uu u soo xulay in Col. C/llahi Yusuf iyo xubnaha baarlamaanka ay ku kulmayaan. Tanaasulkaas xooga badan waxaa ka hooseeya in Shariifka la dareensiiyo in isaga iyo Col. C/llahi labaduba aysan wax awooda ku lahayn magaalada Muqdisho iyo beelaha ka soo jeeda, sidaas daradeedna ay arrintaas ka keento Shariifka garasho ah inuu wax la qabsado kooxda Col. C/llahi oo Itoobiya ay ka taageereyso dhinaca milateriga iyo diblomaasiyada.
Haddii ay israacaan Shariifka iyo Col. C/llahi oo ah siyaasada ay ka shaqeyneyso dowladda Itoobiya iyo Yemen waxaa badaneysa fursada ay garabkaas ku heleyaan isticmaalka magaca iyo hantida dalka, waxaa sidoo kale jubooyinka ay gacanta u geleysaa dowlada Itoobiya oo marmarsiyo ka dhiganeysa iney la dagaalameyso kooxo argagixisaa oo gacanta ku haya maamulada gobolada Shabeele iyo Banaadir.
Dowladaha reer galbeedka ayeysan ka dhaadhacsaneyn siyaasada Itoobiya ee lagu xulafeysiinayo Shariifka iyo Col. C/llahi iney buuxin karto awooda kooxaha Muqdisho oo ah tirada ugu badan doweynaha Soomaaliyeed degaan ay degaan yihiin, kuwaas oo ka heysta taageero buuxda dadweynaha degaankaas , tiro ahaana ay ka dadweyne badan yihiin isbaheysiga kooxda kale
Waxaa dhawaan dalka ku soo wada noqonaya madaxda kooxahaas, waxaana la filayaa meesha heshiis laga filayo in la sii kala fogaado oo ay soo baxaan kooxo cusub, qaarna ay xadka kooxda kale ay u gudbaan. Waxaa intaas murjinaya siyaasada Soomaalida hogaamiyeyaasha sida shaqsiga ah heshiiska u soo gelaya iyo dowladaha Yemen, Itoobiya iyo Talyaaniga oo aan ka gaabsan marnaba iney shaqsiyaadka hogaaminaya kooxaha iyo garabyada ay u sawiraan siyaasad ku dhisan ciyaar iska daba wareega. Col. C/llahi ayaad u mooda inuu sannad walba jecel yahay inuu xaruun ka dhisto magaalo cusub, sidaasna uu ku dhameysto madaxtinimadiisa inta uu ka dhimanayo. waxey siyaasiyiinta taageersan xooga saareen iney kala qeyb qeybiyaan xubnaha dowlada iyo baarlamaanka si aysan marna u dhicin codeyn ka dhana in xilka looga qaado Col.C/llahi, waana siyaasadaas mida loogu tala galay iney ku shaqeyso heshiiska cadan.